May 2, 2022 - Achawlaymyar
လာမည့္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔ ( သို႔မဟုတ္ ) ကမာၻႀကီးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သိရေတာ့မယ့္ေန႔
May 2, 2022 by Achawlaymyar
လာမည့္ ေမလ (၉) ရက္ေန႔ ( သို႔မဟုတ္ ) ကမာၻႀကီးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သိရေတာ့မယ့္ေန႔ အက်ိဳး-အေၾကာင္း၊ အဆိုး-အေကာင္းေတြကို ကြဲကြဲျပားျပားသိျမင္ရမယ့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမ ဒီလိုေခါင္းစဥ္တပ္လို႔ ေမာင္ရွင္ဟာ ေဗဒင္ဆရာလား.. အၾကားအျမင္ရသူလားဆိုၿပီး မထင္ၾကနဲ႔ဦးေနာ္.. ျဖစ္ခဲ့တဲ့သတင္းျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္အျမင္သုံးသပ္တာပါ.. ပထမဆုံးကမာၻ႔ေရးရာကိစၥေတြကေတာ့ ႐ုရွား-ယူကရိန္းအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေမလဆန္းေလာက္မွာ န်ဳလက္နက္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအဆအထိသုံးမယ္..။ မသုံးဘူးဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပားသိလာရလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါကလည္း ‘ပူတင္န်ဴလက္နက္သုံးလာႏိုင္ေခ်ရွိသလား’ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မိမိအျမင္ကိုေရးခဲ့စဥ္တုန္းကအတိုင္း ‘မဟာအရွက္ေတာ္ကြဲေနတဲ့ပူတင္’က အခုဆို ကမာၻႀကီးကို စကားလုံးေတြနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အဆင့္ကေန နမူနာသေဘာ၊ အျမည္းသေဘာနဲ႔ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေခတၱေရာက္ရွိတည္းခိုေနတဲ့ ယူကရိန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ‘ကိယစ့္’ကို ဒုံးက်ည္လက္နက္ပစ္ျပလိုက္ပါတယ္။ (သုံးစားမရတဲ့)ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္း ညႀကီးမင္းႀကီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ထြက္ခြာသြားရတာကိုပဲၾကည့္.. ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကလည္း ‘ရန္သူေတြကိုအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖို႔အတြက္ လက္နက္ေတြအဆင့္ျမင့္ထုတ္သြားမယ္..’လို႔ … Read more
ေခတ္အဆက္ဆက္က အသုံးမက်ခဲ့တဲ့ျမန္မာသံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြကို ဒဲ့ေဆာ္လိုက္တဲ့ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား(႐ုပ္သံ)
Zawgyi ေခတ္အဆက္ဆက္က အသုံးမက်ခဲ့တဲ့ျမန္မာသံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြကို ဒဲ့ေဆာ္လိုက္တဲ့ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား(႐ုပ္သံ) ႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္ဆုံးမွာေဖၚျပထားပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ တိုင္းတစ္ပါးမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ မနည္းမေနာပါပဲဗ်ာ အလုပ္လုပ္သြားေနရတာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ တိုင္းတစ္ပါးမွာ ဖိႏိုပ္မႈေတြရွိတာမစမ္းပါဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ုံးေတြရဲ႕ အသုံးမက်မႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ေခတ္အဆက္ဆက္အသုံးမက်ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးဝန္ထမ္း မ်ားကို သံ႐ုံးေရွ႕မွာပဲ ဒဲ့ေဆာ္ၿပီး ဆႏၵျပေမာင္းထုတ္ ေနေသာ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား….. ဆိုၿပီး ဗီဒီယိုဖိုင္ႏွင့္တကြ တင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္.. ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အာဏာ႐ူးေတြ က်ဆုံးပါေစ…. ခရက္ဒစ္ unicode ခေတ်အဆက်ဆက်က အသုံးမကျခဲ့တဲ့မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာများ(ရုပ်သံ) ရုပ်သံဖိုင်ကိုအောက်ဆုံးမှာဖေါ်ပြထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ မနည်းမနောပါပဲဗျာ အလုပ်လုပ်သွားနေရတာ ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တော့ တိုင်းတစ်ပါးမှာ … Read more
“ နတ် ” ဖွက်တာတဲ့နော်ဂရုစိုက်ကြဦး၊(၁၀)ရက်ကြာမှရွာပြန်ရောက်လာတာတဲ မိန်းကလေးနှစ်ဦးတအာင်း(ပလောင်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့နယ် လုံတောက်ကျေးရွာက အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ် လွေးလဲ့လဲ့ဦးနဲ့ လွေးယဉ်ယဉ်ထွေးတို့ ၂ ဦးဟာဒီဇင်ဘာလ၆ရက်မနက် ၅ နာရီမှာ ကျေးရွာရှိ နေအိမ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ၉ရက်မနက်မှာ လွေးလဲ့လဲ့ဦးနဲ့ လွေးယဉ်ယဉ်ထွေးတို့ ၂ ဦးရဲ့နေအိမ်သို့ရပ်ရွာလူကြီးတွေကို ခေါ်ပြီး အလှူတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လုံတောက်ကျေးရွာခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဘဆွေက“သူတို့ ဗေဒင်ဆရာတွေကို အကူညီတောင်းပြီး အိမ်မှာ ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ဟိုဘက်(ပျောက်တဲ့နေရာ)ပြန်သွားရမယ်လို့ ခဏခဏပြောတယ်။ မိဘတွေလည်း စိုးရိမ်ပြီးတော့ ဗေဒင်ဆရာတွေကို ခေါ်ထားလိုက်တာ” လို့ ပြောပါတယ်။လွေးလဲ့လဲ့ဦးနဲ့ လွေးယဉ်ယဉ်ထွေးတို့ဟာ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့နတ်တွေ ခေါ်သွားတဲ့နေရာကို ပြန်သွားရမယ်လို့ မကြာခဏ ပြောဆိုနေကြပြီး၎င်းတို့၂ ဦးကိုနတ်တွေ ဖွက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် ညနေပိုင်း၅နာရီအချိန်မှာ လွေးလဲ့လဲ့ဦးက … Read more
ေယာက်ာ္းေလး အမ်ားစုအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ သင္မသိေသးတဲ့ အခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်နှစ်မွှာဟာ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း (ယောကျာၤးလေးများ မဖတ်ရ) အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်နှစ်မွှာဟာ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းပါတဲ့။ ရင်တစ်စုံရှိတဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးတွေရှိသလို ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ရင်နှစ်မွှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာဟာ အမျိုးသမီးတွေပဲမို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပြီး တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ဒါကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူးတဲ့။ယောကျာ်းလေး အများစုအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရင်နှစ်မွှာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်မသိသေးတဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အတွင်းခံအင်္ကျီကို ချွှတ်လိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်ဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီချွှတ်လိုက်လို့ ရလာတဲ့ ခံစားမှုပြီးရင် ဒီလောကမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပိုကောင်းရင်တောင် ကောင်းနေမယ်။ ၂။ ရင်နှစ်မွှာဟာ ရွှေ့လျား လှုပ်ရှားနေပြီး တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်း မသိဘူး။ ဥပမာ – အိပ်ယာပေါ် လှဲလိုက်ရင် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ … Read more
တနဂ်နွေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာ ဟောစာတမ်း
တနဂ်နွေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာ ဟောစာတမ်း ယခုအချိန်ကာလတွင် သင့်အနေဖြင့် အလုပ် အကိုင်အသစ် အကြံအစည်အသစ်များ စတင်ပြုလုပ်ရန် ကောင်းမွန်သောအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးကိစ္စများအတွက် စိတ်ရော လူရော ပင်ပန်းနေရမည့်အချိန်ကာလဖြစ်သော်လည်း မိမိကြိုးစားမှုရှိသလောက် အောင်မြင်မှုများရရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေကောင်းမွန်ခြင်းများ ကြုံရပါလိမ့်မည်။ ရာထူး ၊ နေရာ အလုပ်အကိုင် အသစ်များရရှိတတ်ပါတယ်။ အထက်အအကြီးအကဲများ၏ ချီးမြောက်ခြင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းများခရတတ်ပါတယ်။ မည့်သည့်ကိစ္စမဆိုခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဇွဲရှိစွာပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စများ ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ့သာပြုလုပ်ပါ ကံတရားရဲအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို အချေအတင်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များကြားမှ အောင်မြင်မှုရရှိတတ်ပါတယ်။ လူငယ်များ ယခင်ကအချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးအညံ့များမှာ ယခုကာလအတွင်း အကောင်းဘက်သို့ပြောင်းလဲလာမည့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူမရှိသူများ ချစ်သူရရှိတက်ပြီး လက်ထပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများအတွက်မှာ စေ့စပ် ထိမ်းမြား လက်ထပ်ရ၍ အိမ်ထောင်ကျတက်သလို အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးတွင် အဆင် … Read more
တန္(၅၀၀) ေလးၿပီး ေပ (၆၀) ရွည္တဲ့ သံမဏိတံတားႀကီးတစ္စင္းလုံးကို ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္…
တန္(၅၀၀) ေလးၿပီး ေပ (၆၀) ရွည္တဲ့ သံမဏိတံတားႀကီးတစ္စင္းလုံးကို ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္… ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီးလို မ်က္လွည့္ဆရာေလာက္ေတာ့ အိႏၵိယက လူေတြက သနားတယ္… အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ စြန႔္ပစ္ထားတဲ့ ေပ ၆၀ ရွည္ လ်ား တဲ့ သံ မ ဏိ တံ တား တစ္ စင္း ကို သူ ခိုး ေတြ က အ ပိုင္း ပိုင္း ျဖတ္ ျပီး ခိုး ယူသြား ေၾကာင္း တာ ဝန္ ရွိ သူေတြက ဧၿပီ ၉ ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ေလးလံတဲ့ အဆိုပါတံတားကို ဘီဟာျပည္နယ္ရဲ႕ … Read more
စိတ္ဓာတ္က်ေနရင္ ျပင္ဦးလြင္က ဒီေမေမကိုၾကည့္ပါ
စာတစ္လုံးမွ မတတ္ပဲ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီး ျဖစ္လာသူ (႐ုပ္သံ)
ဘီလီယံနာကြီး သူဌေးကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆထားကြပါသလဲ..?ချမ်းသာတဲ့ ဘက်ဂရောင်းအသိုင်းအဝိုင်း ရှိဖို့လိုပါသလား..?MBA, PhD စတဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာတွေ ဘွဲ့တွေ ရထားဖို့ လိုအပ်ပါသလား..? အင်္ဂလန်နိုင်ငံက စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် “ဂျပ်ဖ် ပီယာစီ (Jeff Pearce)” ဟာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး စာတစ်လုံးမှလည်း မရေးတတ် မဖတ်တတ်ပဲ ဘီလီယံနာသူဌေးကြီး ဘဝကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြန်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက “Jeff” မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပထမနာမည်ကို သူကိုယ်တိုင် စာလုံးမပေါင်းတတ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူအောင် “Jeff” လို့ မိဘတွေက ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့ရတာပါ။ “Jeff” ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်များက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လီဗာပူးလ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့တို့ မိသားစုတွေဟာ အရမ်းကို ဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်။ … Read more
သူဌေးလောင်းတို့အတွက် ထိုင်းထီ ချဲလ် ၃ လုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ထားကြနော်
ဒီနေ့မှာ ချစ်ရသူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မအေးသောင်း
ဒီနေ့မှာ ချစ်ရသူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မအေးသောင်း ပုရိဿတွေရဲ့ အသည်းကျော်လေးဖြစ်တဲ့ မအေးသောင်းခေါ် အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ ဒီကနေ့ မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ ချစ်ရသူနဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေအသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ ချစ်သူကတော့ Remax Myanmar ရဲ့ တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မေလ ၂ ရက်နေမှာတော့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ သူမရဲ့ချစ်သူ M Zaw Zaw Latt နဲ့အတူ ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ CAlVARY BAPTIST CHURCH မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှစ၍ နှစ်တရာတိုင် ချစ်ရသူနဲ့ အတူ သာယာပျော်ရွှင်ကောင်းသော ဘဝခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit… Zawgyi ဒီနေ့မှာ ချစ်ရသူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီ … Read more